Fahasalamana/Maneran-tany: Nofoanan’Atoa. Obama ny politikan’ny ”Global Gag Rule” · Global Voices teny Malagasy
Fahasalamana/Maneran-tany: Nofoanan'Atoa. Obama ny politikan'ny ”Global Gag Rule”
Voadika ny 26 Jolay 2018 12:54 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Español, Português, Français, English
Vao tamin'ny herinandro voalohany niasany, efa nanafoana ireo fepetra politika fantatra amin'ny ankapobeny tamin'ny anarana hoe “Global Gag Rule”(amin'ny teny anglisy) ny Filohan'i Etazonia. Noraisin'ireo hetsika ho an'ny zon'ny vehivavy soa aman-tsara izany ary koa ireo vondrona miresaka ny fisorohana sy ny fahasalamana, satria hahafahana indray mamatsy vola ireo fandaharanasa iraisam-pirenena amin'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana.
Nandrara ny famatsiana vola ataon'ny fanjakana amerikana amin'ireo vondrona sy hôpitaly manao na mampiroborobo ny fanalàna zaza na ihany koa miady ho amin'ny famadihana izany ho ara-dalàna ity politika ity, fantatra ihany koa amin'ny hoe ”ireo fepetran'i Meksika”. Nanafoana ireo fepetra ireo i Atoa. Obama ny alin'ny fitsingerenan'ny faha-36 taonan'ny fitsarana ny Roe contre Wade, izay nanaovana ho ara-dalàna ny fanalàna zaza tao Etazonia. Nampidirina tamin'ny 1984 ireo fepetra ireo ary nampiharina na nofoanan'ireo filoha rehetra nifanesy. Manazava ny lahatsoratra iray ao amin'ny blaogy South-South (amin'ny teny anglisy toy ireo blaogy rehetra voatanisa):
”Raràn'ny [fepetra ara-politika ao amin'ny “Global Gag Rule” [fantatra ihany koa amin'ny hoe ”ireo fepetra ara-politikan'i Meksika” na koa ny Lalàna momba ny fanampiana vahiny tamin'ny 1961 (22 U.S.C. 2151b(f)(1))] ny famatsiana ireo hetsika fandrindrana fiainam-pianakaviana ataon'ireo ONG mampiasa ny volany, amin'ny volany fa tsy amin'ny dolara, mba hanomezana torohevitra ireo vehivavy, hiresahana momba ny fanalàna zaza, na hanaovana izany. Noraràn'izy ireo ny famatsiambola, na ho an'ireo ONG efa naneho ny fanohanany ireo lalàna manodidina ny fanalàna zaza azo antoka sy ara-dalàna aza. Nanan-kery nanomboka ny taona 1985 hatramin'ny 1993 ny politikan'ny Gobal Gag Rule, hatramin'ny nanafoanan'ny Filoha Clinton azy. Namerina ity politika ity ny Filoha George W. Bush tamin'ny 2001, ary nanan-kery hatramin'ny zoma 23 Janoary 2009 ilay izy.”
Tsikera maro no nanakiana ilay ”“Global Gag Rule” satria fehezin'ireo fepetra ireo ny fandraisan'ny zanaka ampielezana anjara amin'ny adihevitra momba ny fanalàna zaza any amin'ny fireneny. Araka ny blaogy Texas in Africa, ny olana hafa aterak'ity politika ity dia ny hoe manjavozavo loatra ilay izy.
Tsy raisin'ny Global Gag Rule ho ao anatin'ny kajikajiny ny politikan'ny firenena momba ny fanalana zaza. Fa sakanany ny famatsiambola ireo fikambanana rehetra izay manaiky ny zo hanala zaza, na aiza na aiza eto ambonin'ny tany. Izay midika fa raha misy ONG iray misahana fandrindram-piainam-pianakaviana ka mitantana hôpitaly ao Oganda manome torohevitra momba ny fandrindrana tokantrano ary manao ny fitiliana mialohan'ny fahaterahana, tonga dia tsy manana ny fahafahana hahazo famatsiambola intsony izy tamin'ny mbola nananan'ny Global Gag Rule hery, noho ny toerana nisy azy tao anatin'ity adihevitra tao Etazonia ity. Afaka hamarinina izany na dia tsy ara-dalàna aza ny fanalana zaza ao Oganda, raha tsy hoe misy loza manambana ny ain'ny reny na ny an'ilay zaza angaha.
Tamin'ny 2001, rehefa nametraka ireo fepetran'ny Global Rule Gag ny Fitondram-panjakan'ny Filoha Bush, very famatsiambola ny hôpitaly sasany tao Afrika. Tany amin'ny toerana maro, tao Kenya sy Ghana manokana, nidika tsy fahafahana mahazo ny fitsaboana rehetra intsony izany ho an'ny olona an'arivony maro. Izay fotsiny.”
Teo ampahitàna izany, derain'ny blaogera maro ity fanapahankevitr'i Atoa. Obama ity ary asongadin-dry zareo ny fiantraikany lehibe eo amin'ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny fandrindrana tokantrano manerana izao tontolo izao . Mihevitra i Danie, Danie, Danie fa mila misaotra an'i Atoa. Obama isika, raha toa ka manoratra kosa i Arash Kardan hoe:
”Tsy ho faty intsony ireo vehivavy tena mahantra sy miatrika loza goavana mety hitranga mandritra ny fitondrany vohoka noho ny tsy fahafahan'ny dokoterany hilaza aminy ireo safidy hafa isankarazany. Maro ireo hahazo fahafahana misimisy kokoa amin'ny fitsaboana mahafa-jaza, ary tsy ho faty na hijaly noho ireo ratra maharitra ateraky ny fanapahana an-tsitrapo ny fitondrana vohoka. Tsy ho bevohoka intsony ny vehivavy sasany noho ny tsy maintsy hisafidianan'ireo hôpitaly mpanaramaso ny fiterahana, na hitsipaka ny famatsiambola na hanome ny fitsaboana tsy azo antoka sy ratsy kalitao, na hikatom-baravarana…. Izany no dikan'ny hoe fiovana. Ho voavonjy ny ain'ny vehivavy aman'arivony maro. Efa fotoanan'ny fiovana izao taorian'izay 8 taona nisianà politika mamono izay.”
Na izany aza, nomelohin'ireo vondrona maro miady amin'ny fanalana zaza ity fanapahankevitra ity, ohatra, ilay hoe tokony tsy ho laniana hanohanana ny fanalana zaza ny volan'ny amerikana mpandoa hetra, sy ny hoe hankahery ny fanalana zaza manerana izao tontolo izao izany. Niampanga ny fanapahan-kevitr'i Atoa. Obama ny Vatican, ary niteraka tahotra tany amin'ireo firenena voakasik'ity famatsiambola ity izany. Maneho hevitra momba ireo fanehoankevitra tao Filipina mikasika ireo sehon-javatra ireo ny blaogy filipiana Mike in Manila:
”Misy ny tahotra hoe ho hosokafana aty Azia koa ny famatsiambola amerikana hamatsiana fandaharana maro mikendry ny hanaovana ho ara-dalàna ny fanalana zaza. Nanao tsindry ireo vondrona sasany mba hampifandraisana ny fanampian'i Etazonia amin'ny fanaovana ho ara-dalàna ny fanalana zaza any amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana.
Tena manahirana mafy ireo mpikambana ao amin'ny CBCP [Catholic Bishops’ Conference of the Philippines] (Fivorian'ny Eveka Katolika ao Filipina) mihitsy ity fanapahankevitra ity, izay efa nandefa antso ho an'ireo Amerikana-Filipiana amin'ireo fibaboana rehetra mba hanoheran'izy ireo ity fiovana ara-politika ity sy mba hanaovan'izy ireo hetsika fampielezankevitra, amin'ny fandefasana imailaka sy amin'ny finday, eny anivon'ireo mpikambana voafidy ao amin'ny Antenimieran'ny solombavambahoaka sy ny Antenimieran-doholona amerikana. Angatahana ireo katolika rehetra manerana ny tany mba hanome antoka fa tsy hametraka politika mikendry amin'ny fanaovana ho ara-dalàna ny fanalana zaza erantany ireo ”mpandala ny fahafatesana sy ny fanalana zaza” avy ao amin'ny hery ankavia amerikana.”
Mahatsikaritra i Nicholas, tao anatina hafatra iray niseho tao amin'ny blaogy Staying Left, Living and Driving in South Africa (Mijanona ho havia, Miaina ary Mamily ao Afrika Atsimo), fa tsy dia fahita loatra ny safidy amin'ny fanalana zaza any amin'ny firenena mila ity famatsiambola ity :
”Rehefa miresaka mikasika ny fanalana zaza isika, any amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana manokana, tena saropady ny fandresen-dahatra. Any amin'ny faritra sasany ao amin'ny KwaZulu Natal, ao afrika Atsimo, hatramin'ny 50 isan-jaton'ny vehivavy bevohoka no mitondran y otrikaretina VIH. Raha nahomby ny asako, mety ho nisaintsika tamin'ny rantsan-tanana ny trangana fifindran'ny tsimokaretina VIH avy any amin'ny reny mankany amin'ny zaza fa tsy ampahany mahatratra mihoatra ny 30 isan-jaton'ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Fa midika izay fa mety nahavita làlana tsy misy diso isika. Raha raisina ny harefon'ny rafitra ara-pahasalamana, tena midangana be ny mety ho fifindran'ny tsimokaretina VIH avy amin'ny reny mankany amin'ny zaza, ary raha izaho ilay vehivavy bevohoka, tsy kilalaona kodiankely rosiana / tsy ankitsapaka mba tiako ho lalaovina mihitsy izany.”
Sarin'ny The Abortion Debate avy amin'ny Better In the Basement tao amin'ny Flickr.